ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ - China Products Suppliers & Factory - အပိုင်း 3
အရွက်အရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြီးထွားမှုမီးအိမ်သည်မီးအလင်းရောင်သစ်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်။ အနီရောင်အလင်းလှိုင်းအလျားသည် ၆၆၀nm ခန့်ရှိပြီးပင်စည်ကြီးထွားမှုနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပေါင်းစပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ VC နှင့်သကြားဓာတ်ပေါင်းစပ်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ အပြာရောင်အလင်းသည်သီးနှံစိုက်ပျိုးရာတွင်အသုံးပြုသောအနီရောင်အလင်းအတွက်လိုအပ်သောဖြည့်စွက်အလင်းဖြစ်သည်။ အပြာရောင်အလင်းသည်ပင်စည်အားတိုးမြှင့်ခြင်းကိုတားဆီးပေးပြီးကလိုရိုဖီးလ်ကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်၊ နိုက်ထရိုဂျင်အက်စစ်နှင့်ပရိုတင်းဓာတ်ပေါင်းစပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်၊ antioxidant ပေါင်းစပ်မှုအတွက်အကျိုးရှိသည်။ မတူညီသောဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးများသည်အလင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မတူညီသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။
Hydroponic plant light သည်သစ်ရွက်များဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြီးထွားမှုကိုအလင်းဖြည့်ပေးသည်
အပင်များသို့အလင်းဖြည့်ပါ၊ သူတို့၏ photosynthesis ကိုလှုံ့ဆော်သည်၊ အပင်များတွင်အာဟာရဓာတ်များစုပ်ယူနိုင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ အပူနိမ့်ခြင်း၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်သို့မဟုတ်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မရှိခြင်း
အရည်အသွေးမြင့်ပြီးတာရှည်ခံသည့်သက်တမ်းသည် 50000H အထိထွန်းလင်းနိုင်သည်
လယ်ယာမြေများစွာတွင်များစွာသောအပင်များဖြစ်သည့် Hydroponics၊ ဖန်လုံအိမ်အလင်းရောင်၊ အပင်များကြီးထွားလာခြင်း၊ ပန်းပွင့်ခြင်း၊ အသီးများစသည်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အသစ်သော 1200w ETL ရောင်ခြည်အပြည့်ဖြင့် Hydroponic plant ကြီးထွားမှုအတွက်အလင်းရောင်ထွက်လာသည်
1. မြင့်မားသောအပူစီးကူးမှုလူမီနီယံပရိုဖိုင်းအလင်းဘား Non- သေ - သွန်းလူမီနီယံ
3. ပလပ်စတစ် plug ကို
277V input ကိုမှသက်ဆိုင် 4.
အနီနှင့်အပြာအနီအလင်းနှင့်အပြာအလင်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
အနီရောင်နှင့်အပြာရောင်မီးအလင်းရောင်သည်အပင်များ၏ကြီးထွားမှုအတွက်အဆင့်များစွာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိုးလုံလေလုံဥယျာဉ်များ၊ ရေအခြေခံသည့်သို့မဟုတ်မြေဆီလွှာစိုက်ပျိုးသောအပင်များနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မိုးလုံလေလုံဥယျာဉ်များ၊ ပန်းပင်များ၊ မျိုးစေ့ချခြင်း၊ မွေးမြူခြင်းနှင့်လယ်ယာမြေများအတွက်သင့်လျော်သည်။ သခွားသီးများ၊ ခါးသီးသောသခွားသီးများ၊ ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ သစ်သီးသစ်ရွက်များ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ချယ်ရီသီး၊ ဖရဲသီးနှင့်အခြားအပင်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။